Home Wararka Odoyaasha Sacad: “Hubka nalagu garaacayo waxa keenay C/Shakur C. Mire iyo Abdi...
Odoyaasha Sacad: “Hubka nalagu garaacayo waxa keenay C/Shakur C. Mire iyo Abdi Shire, Farmaajo gadaal buu uga jiraa”
Wararka naga soo gaaraya gobolka Galgaduud iyo Mudug ayaa sheega in dagaal culus uu ka socdo degaanka xuduuda ah ee Itoobiya iyo Soomaaliya. Waxaana halkaasi ku dagaalamaya Maleeshiyo beleedyo.
Dagaalka ayaa dib u bilowday saakay , waxaana ilaa iyo hadda socda dagaal xooggan oo u dhaxeeyo labo Maleeshiyo beeleed kuwaas oo ku hubaysan gawaarida dagaalka. Waxaa jira khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo dagaalka ka dhashay sida ay xaqiijiyeen qaar ka mid ah dadka degaanka.
Odoyaasha dhaqanka ee Beesha Sacad oo la soo xariiray MOL ayaa sheegay in dagaalka ka socda degaanka ee u dhaxeeya beelaha Sacad iyo Mariixaan ay gadaal ka riixayaan labada xildhibaan ee Cabdishakur Cali Mire iyo Cabdi Shire Ciyaal Jecel. Maxamed Elmi Ileey oo ka mida dadka degan degaanka dagaalka ka socdo ayaa sheegay in Beesha Mariixaan (Wagardhac) lagu soo hubeyey hub kaas oo labo asbuuc ka hor uu halkaas keenay Xildhibaan Cabdishakur Cali Mire, labo malinka horna waxaa isna hub iyo lacag soo diray Xildhibaan Cabdi Shire.
Odoyaasha dhaqanka ee degaanka dagaalka ka socda degan ayaa rumaysan in MW Farmaajo qayb ka yahay dagaalka. Mid ka mida Odoyaasha ayaa yiri “ waxaad ii sheegtaa halka beesha Mariixaaan hubka noocaan ah oo saa utiro badan ka keeni karaan xiligaan hadii uusan Farmaajo qayb ka ahayd” .